Madaxweyne Xasan oo Madaxtooyada ku qaabilsay Saraakiisha Somaliya iyo Amisom (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, ayaa waxaa uu caawa Aqalka Madaxtooyada (Villa Somalia) uu kula kulmay Saraakiisha Ciidamada Qalabka Sida Somaliya iyo kuwa Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.
Kulankaan oo ahaa mid casho oo Madaxweynaha uu u sameeyay Saraakiishaasi, ayaa waxaa ka qaybgalay xubno ka tirsan labada gole ee Dowladda iyo marti sharaf kale.
Madaxweynaha Somaliya oo la hadlaayay Saraakiisha, ayaa bogaadiyay hawlgalka ay hormuudka ka yihiin, isla-markaana lagula dagaalamaayo Ururka Al Shabaab.
Madaxweynaha waxaa uu ugu yeeray inay xoojiyaan gulufka militari ee ka dhanka ah Al Shabaab, si Maamulka Dowladnimo looga hirgeliyo dhammaanba dalka.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa dhanka kale ka codsaday inay xaqiijiyaan ammaanka goobaha lagu wado in ay ka dhacdo doorashada sanadkan la fillaayo inay ka qabsoomto Somaliya.
Madaxweyne Xasan oo soo hadalqaaday shirka bisha soo socota ee lagu wado in Ururka Goboleedka Igad uu ku yeesho Magaalada Muqdisho, ayuu sheegay inuu yahay mid lagu qiimaynaayo xaaladda amni ee Somaliya iyo isbedelka horumarineed ee ka jira.
Amiirka Ururka Al Shabaab, Sheekh Axmed Cumar (Abu Cubeydah), ayaa bishii July ku goodiyay inaysan yeeli doonin waxa uu ugu yeeray doorasho dimoqraadi ah oo ka dhacda Somaliya.
Weerarada Shabaab, ayaa waxaa la dhihi karaa waxay ku soo uruureen qaraxyo ismiidaamin ah, oo Caasimadda Muqdisho ay ka gaystaan.
JADWALKA IIDHEHYADA AUGUST 2 2016